လာမဲ့၁၁ရကျ ၁၁လ ၁၁နာရီဆိုတာဘာလညျးဆိုတာ မသိသေးတဲ့သူတှေ ဖတျရအောငျ တငျပေးလိုကျပါတယျ – Askstyle
လာမဲ့၁၁ရကျ ၁၁လ ၁၁နာရီဆိုတာဘာလညျးဆိုတာ မသိသေးတဲ့သူတှေ ဖတျရအောငျ တငျပေးလိုကျပါတယျ
လာမဲ့၁၁ရက် ၁၁လ ၁၁နာရီဆိုတာဘာလည်းဆိုတာ မသိသေးတဲ့သူတွေ ဖတ်ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄) ရက်နေ့ကတော့ ချစ်သူရှိသူတွေအတွက် ချစ်ရသူနဲ့ လက်ဆောင်တွေ အပြန်အလှန်ပေးရင်း ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရတဲ့ချစ်သူများနေ့ပါ။ ချစ်သူမရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အားငယ်စရာမလိုပါဘူး။ Singles’ Day ဆိုပြီးတော့ ရှိပါသေးတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက သတ်မှတ်ထားတာပါ။ Singles’ Day ဆိုပြီး ဘာကြောင့်ပေါ်လာရတာလဲ..? singles တွေ အဲဒီနေ့မှာ ဘာတွေလုပ်ကြတာလဲ..? ဆိုတာတွေကို singles သမားတွေအတွက် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
တရုတ်မှာဆိုရင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နိုဝင်ဘာ(၁၁)ရက်နေ့ကို Singles’ Day လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ တရုတ်လိုဆိုရင်တော့ Guanggun Jie လို့ခေါ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီနေ့ဟာ online shopping day လို့ ပြောလို့လည်းရပါတယ်။ Single သမားတွေ အကြီးအကျယ် Shopping ထွက်ကြတဲ့ နေ့ပါ။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင် အဲ့ဒီနေ့ရဲ့ ပထမ(၁၂) နာရီအတွင်းမှာပဲ Alibaba ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂)ဘီလီယံကျော်ဖိုးလောက် ကုန်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ Alibaba တစ်ခုတည်းပဲရှိပါသေးတယ်။
Singles’ Day ပေါ်လာရတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကတော့ ချစ်သူများနေ့ကို ဆန့်ကျင် (anti-Valentine) ကြရင်း ပေါ်လာတာပါ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်လောက်က Nanjing တက္ကသိုလ်ကနေ စခဲ့တာပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးမှာတော့ တခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာပါ ပျံ့သွားခဲ့၊ အင်တာနက်တွေမှာပါ တစ်ခေတ်ထခဲ့ရင်း နောက်ဆုံးမှာတော့ တခြားနေ့တွေလို တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် Singles’ day ဆိုပြီးပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ဘာကြောင့်နေ့တွေ အများကြီးထဲကမှ နိုဝင်ဘာ(၁၁)ကိုရွေးရသလဲဆိုတော့ (11/11)၊ တစ်ဂဏန်းဆိုတာ တစ်ကိုယ်တည်း၊ တစ်ယောက်တည်းကို ကိုယ်စားပြုတာကြောင့်ပါ။
Singles’ Day မှာဆိုရင် တစ်ကိုယ်တည်း Single သမားတွေစုပြီး ပါတီတွေကျင်းပ၊ ဈေးဝယ်တွေထွက်၊ အစွံထုတ်ဖို့ ‘Blind Date’ ပါတီတွေ လုပ်ကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ အမျိုးသားတော်တော်များများကပဲ အဲဒီနေ့မှာ ပါဝင်ခဲ့ကြလို့ “Bachelors’ Day” လို့ ခေါ်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အမျိုးသားတွေရော၊ အမျိုးသမီးတွေပါ ပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
ဖဖေျောဝါရီ(၁၄) ရကျနကေ့တော့ ခဈြသူရှိသူတှအေတှကျ ခဈြရသူနဲ့ လကျဆောငျတှေ အပွနျအလှနျပေးရငျး ကွညျနူးပြျောရှငျရတဲ့ခဈြသူမြားနပေ့ါ။ ခဈြသူမရှိတဲ့သူတှအေတှကျလညျး အားငယျစရာမလိုပါဘူး။ Singles’ Day ဆိုပွီးတော့ ရှိပါသေးတယျ။ တရုတျနိုငျငံက သတျမှတျထားတာပါ။ Singles’ Day ဆိုပွီး ဘာကွောငျ့ပျေါလာရတာလဲ..? singles တှေ အဲဒီနမှေ့ာ ဘာတှလေုပျကွတာလဲ..? ဆိုတာတှကေို singles သမားတှအေတှကျ ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
တရုတျမှာဆိုရငျ နှဈစဉျနှဈတိုငျး နိုဝငျဘာ(၁၁)ရကျနကေို့ Singles’ Day လို့ သတျမှတျကွပါတယျ။ တရုတျလိုဆိုရငျတော့ Guanggun Jie လို့ချေါပါတယျ။ တကယျတော့ အဲဒီနဟေ့ာ online shopping day လို့ ပွောလို့လညျးရပါတယျ။ Single သမားတှေ အကွီးအကယျြ Shopping ထှကျကွတဲ့ နပေ့ါ။
၂၀၁၆ ခုနှဈတုနျးကဆိုရငျ အဲ့ဒီနရေဲ့ ပထမ(၁၂) နာရီအတှငျးမှာပဲ Alibaba ဝကျဘျဆိုကျမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ (၁၂)ဘီလီယံကြျောဖိုးလောကျ ကုနျပစ်စညျးတှေ ရောငျးထှကျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါဟာ Alibaba တဈခုတညျးပဲရှိပါသေးတယျ။
Singles’ Day ပျေါလာရတဲ့ သမိုငျးကွောငျးကတော့ ခဈြသူမြားနကေို့ ဆနျ့ကငျြ (anti-Valentine) ကွရငျး ပျေါလာတာပါ။ ၁၉၉၃ ခုနှဈလောကျက Nanjing တက်ကသိုလျကနေ စခဲ့တာပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နောကျဆုံးမှာတော့ တခွားတက်ကသိုလျတှမှောပါ ပြံ့သှားခဲ့၊ အငျတာနကျတှမှောပါ တဈခတျေထခဲ့ရငျး နောကျဆုံးမှာတော့ တခွားနတှေ့လေို တရားဝငျသတျမှတျထားတာမြိုးတော့ မဟုတျပမေယျ့ Singles’ day ဆိုပွီးပျေါလာခဲ့တာပါ။ ဘာကွောငျ့နတှေ့ေ အမြားကွီးထဲကမှ နိုဝငျဘာ(၁၁)ကိုရှေးရသလဲဆိုတော့ (11/11)၊ တဈဂဏနျးဆိုတာ တဈကိုယျတညျး၊ တဈယောကျတညျးကို ကိုယျစားပွုတာကွောငျ့ပါ။
Singles’ Day မှာဆိုရငျ တဈကိုယျတညျး Single သမားတှစေုပွီး ပါတီတှကေငျြးပ၊ ဈေးဝယျတှထှေကျ၊ အစှံထုတျဖို့ ‘Blind Date’ ပါတီတှေ လုပျကွတာမြိုးလညျးရှိပါတယျ။ အရငျတုနျးကတော့ အမြိုးသားတျောတျောမြားမြားကပဲ အဲဒီနမှေ့ာ ပါဝငျခဲ့ကွလို့ “Bachelors’ Day” လို့ ချေါခဲ့ကွဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုတော့ အမြိုးသားတှရေော၊ အမြိုးသမီးတှပေါ ပါဝငျဆငျနှဲတဲ့နလေ့ေးတဈနေ့ ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။